Weyshaan u Xidhay… | Hoyga Suugaanta ee Doollo
Qormooyinka Doollo	0
Waxaan dhawaan dhagaystay cajalad uu duubay Qaryaan Dhoodaan, cajaladdaa oo uu ku saxayo taariikho iyo suugaan si ka duwan sidii saxda ahayd loo tabiyey. Markii aan laba saddex jeer dhinaca kale uga baxay ayaan waxaan haahaabtay qalin iyo waraaq aniga oo is idhi Allaa ku lehee wax uun kala hadh xikmadda ma guurtada ah ee qaryaanku cajaladda ku qabtay. Waxaan haddaba galay kala doordoorasho iyo isbarbardhig aan leeyahay tolow qisadeed ku hormartaa. Ma tan, taa, tii, mise tu kale. Dhawr jeer haddii aan laba-qalbiyeeyey, dhawr goor oo kalena saddaradii aan qoray aan qashinka ku daray, waxaan ugu dambayn goostay qisadan Dhoodaan sida hufan dhagaysiga ugu soo gudbiyey inaan qoraal ahaan usoo bandhigo.
Sadarkii ugu dambeeyey markii aan ebyay ayaan dib u milicsaday si aan u saxartiro. Kolkaa ayaa waxaan xaqiiqsaday inaanan sheegan karin qoraalkan ee hadalkii Dhoodaan ee cajalka dhex giraangirsanaa sidii anigoo Dhoodaan karraani u ah aan rogay oo aan daabacay. Waxaan dabadeed is idhi mar haddaan Dhoodaan wali qorin, inaad adigu qorto, isagoon ku wakiilanin laakiin aan is leeyahay koley daa kuma dhaheen, waa wax ku ool. Fahamkaa iyo dareenkaa is cuskaday ee ogaalka ku dhisay ayaa dhaliyey in aad maanta waraaqdan akhriso.
Qisaba qiso ka tilmaamane tani waa weyshii cabeebsanayd oo sida laga yaabo inaad maqashay dadka qaar ay tuhun-dhigeen si xaqiiqda dabamarsanna u tabiyeen. Tabintaa hubaasha dhaafsiisan waxaa lagu sababayn karaa ogaal li’i. Waxaase dhici karta in dadka qaar ay ka shakiyaan ama ay aaminaan in nin-jeclaysi iyo bililiqaysi suugaaneed aanay meesha ka madhanayn. Sida dambe qofkii aamina waa yeelkii, ta horese u badi oo ka haqabbeel dhacdadan, dhagaysi iyo akhrisba. Waxaan kuu sugayaa in aan Dhoodaan hor fadhiistay oo aan qisadan ka dhagaystay muddo haatan laga joogo dhawr sano xilliggaa oo uu gabayaagu joogay magaalada Nayroobi ee dalka Kiiniya.
Anigoo sooyaalka taariikhda kasoo raraya cajaladii uu Dhoodaan duubay, ayaa waxaa la yidhi wareemeysi sokeeye ayaa dhexmaray laba qoys oo Ogaadeen ah oo la kala yidhaahdo Isaaq Aadan, Bah Gari, iyo Reer Warfaa, Reer Cabdille. Dhawr goobood ayey labadan qoys ragna isaga laayeen xoollana ku kala qaadeen. Colaadii waxay soo guura-bahalaysaba Isaaq Aadan ayaa geel laga soo qaaday. Haddii geel la qaado ninka dhacani xeelad, xeer, iyo xoog kolba kuu kusoo celin karo ayuu ciirsan jiray. Isla waqtiga warka dareenka lehi yimaado ayey barbaartu salabka boobi jirtay, buxuushtuna ergo degdeg ah diyaarin jirtay. Waxaa la yidhi Aw Yuusuf Barre oo geel la qaaday ergo u ah ayaa gabay mariyey:
Nin caddaaday cadaabkiiba, waa lagala ceesaaye
Rag cirroobay baa nagu jiree, geela noo celiya
Siddii dhaqanku ahaa odayaal Isaaq Aadan ah ayaa ka daba yimid geelii si ay tolnimo iyo wadahadal ugu dayaan in geela lagu soo celiyo, dhiig daata iyo gurbays iyo gadh-modoobayaal isku madhana ay uga hortagaan.
Odayaashaa waxaa hormuud u ahaa Cilmi Guud-Cad, Xeef Ileey, iyo Caafi Geeraar. Waxay jilib culustaasi la kulmeen dhiggood ka socday dhinaca Reer Warfaa oo ay ka mid ahaayeen Warfaa Faarax Cadde, Reer Ugaas, iyo Guraase Xaaji Cali, Reer Dalal. Waxaan isleeyahay maqaawiirtaasi dhammaan waa uun aakhiro sidaa daraadeed Allow u naxariiso inaan ugu duceeyo ayaa igu waajibtay mar haddaan magacaabay. Haddii cidi ka nooshahay naxariista noloshaba way ugu baahan yihiin.
Gar iyo xeer dheegasho ayuu samo-kataliskii beeshu jilibka u laabtay. Geela aan celino oo aan tolka ku kala hagoogano ayaa guurtidii ra’yiyeysay. Hase ahaatee wiil dhalinyaro ah oo malaha rabay in dagaal lagu kala foodqaado lana odhan jiray Ina Mataan, Reer Xandule, Baha Magan, Reer Warfaa, ayaa gabay tiriyey isagoo ku haasaawaya geela sidii uu usoo qaaday iyo sida raggii maali jiray u hamraday. Wuxuu muujiyey in cudud loo sheegto mooyee in aan si kale geela farihiisa lagaga bixin doonin. Barbaar geel soo dhacay oo dabadeed maslaxo dhaafsay taariikhda degaankan kuma badna, Ina Mataanna barbaarta xilliggaa ayuu la mid ahaa. Inta naga soo gaadhay wuxuu yidhi:
Hashu waa hashaan ugu dhex tagay, Habar Saleebaane
Huurmood iyo yaraankoodba, waw hagar la’aayeene
Iskagama hadheen geela ay, qalab u haystaane
Kama hawlyareysteene way, hidin la’aayeene
Hurre Caliyo Xeef maalinbay, hirigta jiidhiine
Kol hadduu raggii Hira lahaa, hawdka uga yaacay
Qolti hogol leh oo hays yar iyo, madi horaad weyn leh
Anigaa helyeyoo hashaa, waanigii helaye
Horin iigu soo godol bagaan, Haybe soo dhacaye
Gabaygii Ina Mataan ayaa loo geeyey Isaaq Aadan. War ninku caaqsanaa ama cadowsnaa iyo miyaan dadku cashiiro wada dhalatay ahayn cidna isma weydiinin! Dadkii digashada Ina Mataan maqlay ruux la yaabay wiilka iyo haasaawihiisa toona ma jirin maxaa yeelay geela ayaa xilligaa ahaa mid hadba ninkii u xoog bata xeradiisa ku jira. Ninkii muruq iyo dhac ama dhaqaale iyo daryeel ku tanaadiya ayaa warkiisa iyo weedhiisu wax ku ool ahaayeen, weeye iyo war muxuu yidhiduna gaar u ahayd. Qofkii xilligaa joogay ee la yaaba geel la qaaday, nin-karmeedkii qaadayna dumarkii ku dalaaqay in aanay maslaxo dhaafsanaynin tuludda u ahaatay, laga-roone iyo damane aan waayaha iyo xilligga lagu sugan yahay la qabsan karin ayuu u muuqan jiray.
Wuxuu xilligani la tilmaan ahaa xilligii uu gabyaagii Carbeed lahaa hadalkii macnihiisu ahaa: ninkii aan darkiisa hubkiisa ku difaacanin waa laga dumin, ninkii aan dadka dulmiyinna waa la dulmiyaa. Wuxuu ahaa xilli colaadi ku habsatay geyiga nimankan isu jawaabaya ay ku dhaqnaayeen. Wuxuu ahaa xilli ninkii muruq lihi uu maalo, kii miskiin ahina uu midhaysto. Anoon waxba ku dheeraanin sifaynta xilliggan, Guure Dulyar oo ahaa gabayaa gaamuray, jilibkiisana af-hayeen u ahaa ayaa kasoo jawaabay tixdii Ina Mataan oo tiriyey gabay ay naga soo gaadhay:
Lix kun iyo lix deyrood ninkii, libin macaan haystay
Waxaad cadho la luudoo isagu, kibir la liicaaba
Mar unbuu adoo laaci kara, luqunta keenaaye
Intaan laabta kaaga degaan, kaa likayn warane
Waxba gabayga laanlaansiga ah, luuqda haw badanin
Gabaygii Guure Dulyar ayaa la keen Qorraxeey iyo degaanka Reer Warfaa. Hubaali waa helkeedee, waxaan is idhi ka jawaabe oo gabay kale ka celiye iyada oo aan waliba yaa u jawaabi kara iyo hebel ha la raadiyo midna lagu daahin gabyaaga xilligaa joogay ee Reer Warfaa oo faraha ka batay awgeed.
Haddaba Guure Dulyar ma ahayn kaliya nin gabayaa ah ee waxaa kale oo uu ahaa ammaanduule ciidan, wuxuuna ka dhabeeyey goodigiisii oo uu duulaan culus dumay. Duulaankii ayuu kusoo mooraduugay geel iyo lo’ badan. Waxaa lo’da la socotay weyl baadi ah oo bugta oo aad u ciyeysay. Guure oo aad u shanqadh tiranayey rabayna inaan qardaftiis ah la maqal inta uu kala xerogalayo xoolaha ayaa amar ku bixiyey in weysha geed lagu tigtigo oo laga reebo duulaankan sii dheelmadka ah.
Qeylaa willane yaa dadkii, waydan kaga yeedhshay
Siddii weylo baadi ah maxaa, kaga wadhaac siiyey
Waraabaha qarsoon yaa noqdayoon, ruux wajiga moodnay
Col Qoraxeey raacdo kasoo galay oo guure ah maalkii lasoo dhacayna ku raad taagan ayaa weyshii oo ciyeysa dabna agteeda ka baxayo xilli dambe kasoo dul dhacay. Qamaame ayuu markiiba oodda soo jabiyey ninba ninkuu ka gacan fududaa tabta iyo tabcada dagaalkana uga aqoon liitay. Col isu gibilo weyn ayey Soomaalidu horay u tidhiyee kuwii duulaamada ku caan baxay aqoontana u lahaa dagaal iyo camaladiisaba ayaa qiyaastayda is weydiiyey: war maxaynu yeelaa nimankii halkanay fadhiyaan iyo war u kaadiya aan xeel dagaal xariiqnee! Mir iyo in xilligaa weerar la galaa-bixiyo iyo in subixii waagu markuu soo iftiimo lagu kala baxo ayey midood ahaatey. Waxay talo ku ibo-beeshay in la dul fadhiisto halkan la is yidhi xoollihii ayaa ku hoyday. Ilaalo iyo gaadh wada jira ayaa lagu wareejiyey si aan fudho yar oo xataa neef qudhihi ka fakado loo helin.
Ogaadeenku ways wada wargalin, wadar ahaantiise
Waatay harraadee wardiday, waasac ololkiiye
Waxaan qoraalkan kuugu soo qadimay inay ka faa’iidaystaan kuwa khaldamay ee aqoondaradu u gaysay in ay ku sheegaan qisadan iyo gabayada la xidhiidhaba rag kale oo aan ahayn kuwaa sare ku xusan. Waxaa kale oo aan idiin soo gaadhsiiyey qisadan in kuwa boolida iyo xalaashu isugu midka tahay ay u noqoto hangool xaqiiqi ah oo aad hanqalaalka kaga riixdo markii ay kugula soo daqaqamaan sheekooyinka minguuriska ah ee marfashyada lagu qayilo lagu soo malmaluuqay. Waxaanu leenahay sidii Dhoodaan uu lahaa:
 Cabdi Qaadir Xirsi Yamyam cajalad uu duubay ayaan ka dhagaystay labadan meeris. Dad kalena waan ka hubiyey.
 Waasac: waa hal magaceed, geel oo dhan ayuuse ujeedaa.
Ka durduurta waataad wax badan iga dalbayseene...